कहिलेसम्म यस्तो ज्यादती सहेर बस्ने ? भारतले सीमा स्तम्भ सार्‍यो « Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha
भारत ! नेपालको आन्तरिक मामलामा नबोल : वाइसिएल »
उहाँले नेपालतर्फको सामुदायिक वनमा खनजोतको जानकारी आएकाले सत्यतथ्य बुझ्न प्रहरीको एक टोली त्यसतर्फ पठाइएको बताउनुभयो ।
एसएसबिद्वारा महकाली पारिका नेपाली लखेट्न सुरु:
सुरक्षाका लागि जनताद्वारा प्रहरीमा निवेदन:
केशवराज जोशी, कञ्चनपुर २२ जेठ । महाकाली पारीको गाविस दोधरामा भारतीय एसएसबिले नेपालीहरुलाई गाउँ छाड्न धम्की दिने गरेको उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरुले बताएका छन् । एसएसबिका साथै उक्त क्षेत्रका एक अज्ञात समुहले पनि बारम्बार धम्कि दिँदै नेपालीहरुलाई गाउँ छाड्न दबाव दिने गरेका छन् । महाकाली पारी नेपालका दुई गाविस दोधारा र चाँदनी रहेका छन् । ति गाउँका नेपालीहरुलाई सताउन थालेपछि गाउँलेहरुले सुरक्षाका लागि प्रहरीमा उजुरी समेत दिएका छन् ।
करिव ३ दर्जन परिवार रहेको सो स्थान भारतको सीमानाकासंग जोडिएको छ । हामीहरुलाई यहाँबाट हट्नुस यो हाम्रो जमिन हो भन्छन् स्थानियवासी लालवहादुर सुनारले भने । उनीहरु आफुलाई भारतीय सरकारका जासुस भएको गाउँलेहरूले बताएका छन् । स्थानियबासीहरुले दोधरा प्रहरी चौकी र सीमा सुरक्षा वेसक्याम्प दोधरा प्रहरीलाई लिखित निवेदन दिएका छन् ।
जोगवुडा र महाकाली नदीले काटेर टापुजस्तै वनाईदिएको सो क्षेत्रमा भारतीय एसएसवीले समेत दिनहु आफुहरुलाई नेपाल छोड्न दवाव दिएको स्थानियवासीहरु बताउछन् । कहिले दारु खुवाउ भन्छन्, कहिले मुर्गा खुवाउ भन्दै धम्क्याउछन् – स्थानियवासीहरुको भनाई छ । यस्तै दोधराका अन्य स्थानहरुमा समेत भारतीय एसएसवीका जवानहरुले नेपाली गाउँमा पसी नेपालीहरुलाई दुःख दिने गरेका गाउँलेहरुको भनाई रहेको छ । दोधरा-१ कञ्चभोजमा भारतीय नागरिकहरुले आफ्नो भूमीमा पाइला नटेक्न भन्दै नेपाली नागरिकहरुलाई धम्की दिने गरेका छन् ।
स्थानियवासी वीरसिहं सुनारको आफुहरु भारतीय ज्यादतीको प्रतिरोधका लागि तयार रहेपनि नेपाली प्रशासनले चासो नदेखाएको आरोप छ । पिलर नम्वर १३ मा समेत भारतीय एसएसवीले नेपालीहरलाई आतंकित पार्ने गरेका छन् । दोधारा-६ शान्तीटोलका स्थानियवासी राकेश रावलका अनुसार भारतीयहरुले चेकजाँचका बाहानामा अनावश्यक मानसिक पीडा दिने गरेको बताए ।
यस्तै दोधरा-१५ नम्वर सीमास्तम्भ देखि १७ नम्बरसम्म भारतीय एसएसवी नेपाली भूमीमै अड्डा जमाउने गरेका छन् । ३ महिना अघि जनताहरुले ८ जना भारतीय प्रहरीलाई हतियार सहित समातेर प्रहरीलाई बुझाएका थिए । भारतीय ज्यादती बढ्दै गएपछी उनीहरुले असुरक्षाको महसुस गर्न थालेको स्थानिय माओवादी नेता इन्द्र रावतले बताए । यस्तै चाँदनी गाविसमा समेत सामान ओसार पोसारमा भारतीय एसएसवीले दुख दिने गरेको छ ।
कपिलबस्तुमा पनि उस्तै आतङ्क :
जिल्लाको मुख्य भन्सार नाका कृष्णनगरमा नेपालीहरू भारतीय सीमा सुरक्षा वल एसएसबीको ज्यादती सहन बाध्य छन । सीमा क्षेत्र कृष्णनगरमा खटिएका भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका जवानको ज्यादती सहन उनीहरू बाध्य भएका हुन्। एसएसबीको ज्यादतीले सर्वसाधारणले निक्कै सास्ती खेप्नु परेको छ। गत सोमवार कृष्णनगरमा चरेशसहित २ भारतीय प्रहरी पक्राउ परेपछि उनीहरूले अनेक बहानामा नेपालीहरूलाई दुब्र्यवहार गरी रहेको पीडित नेपालीले गुनासो गरे।
नेपालको कृष्णनगर र भारतको बढनी बजारमा सीमा क्षेत्रको छोटो र पुरानो बाटो हुादै आवतजावत गर्नेलाई पक्राउ गरी कुटपटि र अनेक शारीरिक यातना दिई छाड्ने गरेका छन्। एसएसबीले पहिलेदेखि चल्तीमा रहेको पूराना बाटो बन्द गरी मुख्य भन्सार नाका हुादै एउटै बाटोबाट आवतजावत गर्न सर्वसाधारणलाई बाध्य बनाएको छ तर सर्वसाधारणलाई कुनै जानकारी नदिई एसएसबीले पूराना र छोटा बन्द गरेको आरोप स्थानीय बासिन्दाले लगाएका छन्।
पूरानो बाटो बन्द भएको थाह नभई आएका धेरै सर्वसाधारण एसएसबीबाट यातना पाइरहेको कृष्नगरका रमजान मुसलमानले बताए। दशगनामा डियुटी गर्ने एसएसबीका जवानले सीमा पार गर्न खोज्ने सर्वसाधारणलाई लौरोले अनाहकमा कुटपीट गर्ने र प्रचण्ड घाममा कान समातेर उठबस गराउने गरेका छन्। त्यस्तै कान समातेर कुखुरा बनाई बस्न लगाउने र साइकल लिएर आए साईकल काधमा राखेर हिड्न लगाई यातना दिइरहेको स्थानीय नेपाली नागरिक मोहन मिश्राले बताए। अहिले दैनिक बिसौं नेपाली नागरिकले यसरी याताना पाइरहेका छन् ।
१० १५ दिनदेखि एसएसबीको याताना दिइरहादा पनि कसैले बोलेका छैनन्। हतियार र लौरो लिएर दशगनामै बसेर एसएसबीले डियुटी गर्ने गरेका छन्। कहिले काही त एसएसबी डियुटी गर्दा गर्दै नेपाली भूभागमा हतियारसहित आई पुग्छन् तर बोल्ने कोही छैन स्थानीय मतिमले भने । १५ मिटरको फरकमा रहेको नेपाली र भारतीय बजार आवजजावत गर्न पूरानो बाटो छोटो पनि र सजिलो भएको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउछन्। यहाका कतिपय ब्यापारी र सर्वसाधारणको दुबैतिर ब्यापार, पसल र घरायसी सम्बन्ध रहेका कारण आवतजावत बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। यस बिषयमा कुनै जानकारी नभएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।
श्रोत: अस्वीकृत ﻿
This entry was posted on June 6, 2010 at 9:38 am	and is filed under समाचार. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.